Karen Community Association UK: June 2012
Siege of Kachin State: 2012
ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူထားမှုများကို KNU နှင့်ဦးအောင်...
KNU နှင့် မြန်မာအစိုးရကိုယ်စားလှယ် ထပ်မံတွေ့ဆုံ
ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေ ပြည်တော်ပြန်ချင်တိုင်း ပြန်လိ...
ကျောင်းချိန်ပြင်ပ၌ မွန်စာပေ သင်ကြားရေးသည် လက်တွေ့ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာအဖွဲ့အစည...
ကေအန်ယူနှင့် အစိုးရ တပ်နေရာချထားရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးမည...
နယ်သာလန်တွင်အခြေချခွင့်ရသည့် ကရင်နှင့် ရခိုင်တော်လ...
ကရင်တိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ ယူကေ မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု...
မြန်မာ့အရေး ပြည်တွင်းပြည်ပ ဆက်လက်လှုပ်ရှားဖို့ ဒေါ်စ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျီနီဗာ ရောက်
Daw Aung San Suu Kyi visit Maela Camp- Kwekalu
Aung San Suu Kyi visiting Mae La Camp - video from...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စောင့်ကြိုခဲ့တဲ့ မဲဆောက်ရောက...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မယ်လစခန်း သွားရောက်
East Asia 2012 - Press Conference with Daw Aung Sa...
KCA Sheffield General Meeting and Election 2012
Posted by KCA.UK at 01:040comments
ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူထားမှုများကို KNU နှင့်ဦးအောင်မင်းအဖွဲ့ ပြန်ဆွေးနွေး
ဇွန်လ ၂၆ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
KNU အတွင်းရေးမှူးချုပ် နော်စီဖိုးရာစိန်က “ကျမတို့ ဆွေးနွေးတာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးထားတာ တွေ၊ သဘောတူညီဖြတ်ထားတဲ့အပေါ် ပြန်ပြောဆိုကြပြီး ရှေ့ဆက်ဘာတွေ လုပ်မလဲပေါ့။ နောက် ကျမတို့ KNU ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် အပြောင်းအလဲတွေ သူတို့ကို အသိပေးတယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေ ပြည်တော်ပြန်ချင်တိုင်း ပြန်လို့မရသေး
မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂၊ ဇွန် ၂၆၊ ၂၀၁၂
၂၀၁၁ နှစ်လည်ကတည်းက ကြံ့ဖွံ့အစိုးရသစ်၏ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်က အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ပြည်ပရောက်မြန်မာများ ပြည်တော်ပြန်ကြဖို့အရေး ဖိတ်ခေါ်နေခဲ့သည်။ အစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အကျိုးဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီး ပြည်တော်ပြန်ကြသူ မြန်မာများကိုလည်း ပြည်တွင်း ပြည်ပမီဒီယာများတွင် သတင်းအဖြစ် တွေ့နေကြရသည်။ သို့သော်လည်း ပြည်တော်ပြန်လိုသူ မြန်မာတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ပြန်ခွင့်ရနေသည်မဟုတ်ဟု အမေရိကန်ပြည်ရောက် မြန်မာအချို့က မိုးမခသို့ ပြောကြားသည်။
ဥပမာအားဖြင့် တပ်မတော်ကို တော်လှန်ပြီး ထွက်ခွာလာသူ မြန်မာစစ်မှုထမ်းများ၊ အစုိုးရ၀န်ထမ်းအဖြစ်မှ မိမိသဘောအလျောက် နှုတ်ထွက်သွားသူ မြန်မာအစုိုးရ၀န်ထမ်းများ ပြည်တော်ပြန်ရေးအတွက် တိကျသော သဘောထားနှင့် တုန့်ပြန်မှုများ မရှိသေးကြောင်း အချို့က ပြောကြားသည်။
ကျောင်းချိန်ပြင်ပ၌ မွန်စာပေ သင်ကြားရေးသည် လက်တွေ့ မဖြစ်နိုင်
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မီတီအဖွဲ့မှ ခွင့်ပြုခဲ့သော အစိုးရ ကျောင်းများ၏ ကျောင်းချိန် ပြင်ပ၌ မွန်စာပေ သင် ကြားရေး အစီစဉ်သည် လက်တွေ့ မကျနိုင်ကြောင်း မွန်ပြည်သစ် ပါတီ ဗဟို ပညာရေး ဌာနမှ ပြောပါသည်။ ကျောင်းချိန်ပြင်ပသည်၊ ကျောင်းသားများ အတွက် စိတ်ဝင်စားမှု နည်းသည့် အချိန်ဖြစ်သလို၊ ပင်ပမ်းချိန် ဖြစ်သဖြင့် ထိရောက်မှု ရှိမှာ မဟုတ်ကြောင်း မွန်ပြည်သစ် ပါတီ ပညာရေး အရာရှိ တဦးက ဆိုပါသည်။
“ ဒီ အစီအစဉ်ကို မွန်ပညာရေး ဌာနက ကျိုက်မရော မြို့နယ်မှာ အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ဘူးပါတယ်၊ မဖြစ်မြောက်ခဲ့ပါဘူး။ ခလေးတွေက ကျောင်းချိန် ပြင်ပ ဆိုရင် စိတ်မဝင်စား ကြတော့ဘူး၊ နောက် စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ကလည်း ခလေးတွေ ပင်းပန်း ထားတာတွေ အနားယူနိုင်ဖို့ သူတို့ အားလပ်ချိန် တွေလည်း လိုအပ်ပါတယ်၊ ဖြစ်သင့်တာက မွန်စာပေကို အစိုးရ ကျောင်းချိန်တွင်း တစ်ချိန်ချိန်မှာ သင်ကြားခွင့်ရရင်တော့ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်” ဟု မွန်ပညာရေး ဌာန တာဝန်ခံ မိစားတားက ပြောပါသည်။
Posted by KCA.UK at 15:430comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်တွေ့ဆုံ
ကေအန်ယူနှင့် အစိုးရ တပ်နေရာချထားရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးမည်
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်မင်း ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ ဒီလ မကုန်ခင် ထပ်မံတွေ့ဆုံပြီး တပ်နေရာချထားရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကေအန်ယူ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ စောဒေးဗစ်သာကပေါကို မေးမြန်းရာမှာ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး တရားဝင်တွေ့ဆုံမှုကတော့ လာမယ့် လအတွင်းမှာမှ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နှစ်ဖက်သတင်းရပ်ကွက်တခု အဆိုအရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းတို့ အဖွဲ့ဟာ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ကေအန်ယူ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်တွေနဲ့ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံနိုင်သလို ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် အပါအ၀င် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် အခြေပြု တခြားအဖွဲ့တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံဖွယ်ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကေအန်ယူ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး ၁ ဗိုလ်မှူး စောလှငွေက တွေ့ဖို့ရှိပေမယ့် ဘယ်တော့လာမယ်၊ ဘယ်မှာတွေ့မယ်၊ ဘယ်သူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
တကယ်လို့ တွေ့ဖြစ်တဲ့အခါ ဆွေးနွေးမယ့် အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗိုလ်မှူး စောလှငွေက “ဟိုတခါ သွားတုန်းက ကျနော်တို့ ၂ ဖက် တပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၂ ဖက်တပ်တွေကတော့ လိုက်နာရမယ့် တပ်တွေ အဲဒီအချက်အလက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ ထင်တာပဲ။ နှစ်ဖက်တပ်တွေ တဖက်နဲ့ တဖက်၊ သွားလာတုန်း အထိအခိုက် မဖြစ်ရအောင် နှစ်ဖက်တပ်ရဲ့ နေရာတည်ရှိမှု သတ်မှတ်ချက်တွေ လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေလည်း ရှိတယ်။”
အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက် နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော် လက်နက်ကိုင် တိုက်ခိုက်လာတဲ့ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးဟာ လက်ရှိအစိုးရ လက်ထက်မှာ ပြည်နယ်အဆင့်၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ပြီး တိုက်ပွဲတွေ ရပ်နေပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်တွင်း ပညာရေးနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်းလို ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတချို့မှာ အစိုးရဘက်နဲ့ အစပျိုး ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 09:380comments
နယ်သာလန်တွင်အခြေချခွင့်ရသည့် ကရင်နှင့် ရခိုင်တော်လှန်ရေး သမားများအတွက် KNU ၀မ်းမြောက်
ဇွန်လ ၂၁ရက်၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်များထဲတွင် ၁၃ နှစ်ကြာ အကျဉ်းခံခဲ့ပြီး ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့် ကရင်နှင့် ရခိုင်တော်လှန်ရေးသမားများမှ ၃၁ဦးသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံသို့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အခြေချရန် ထွက်ခွာသွား နိုင်ခဲ့သည့်အပေါ် ၀မ်းမြောက်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး-KNU က ယနေ့ ပြောကြားလိုက်သည်။
KNU ဒု-ဥက္ကဌ ပဒိုစောဒေးဗစ်သာကပေါ်က “အိန္ဒိယမှာ အကျဉ်းသားဘ၀နဲ့ နေတာလည်း ကြာပြီလေ။ အခုလို နယ်သာလန်နိုင်ငံကို သူတို့တွေ ထွက်ခွါတဲ့သတင်းကို ကြားရတာ ကျနော်တို့ ၀မ်းသာပါတယ်။ သူတို့တွေ ဟိုမှာ ရောက်(နယ်သာလန်နိုင်ငံ)လို့ ကျနော်တို့ ဆီကို ပြန်လာနိုင်ရင် ကောင်းတယ်။ ပြန်လာစေချင်တယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး(UNHCR)၏ အကူအညီဖြင့် ယခုဇွန်လ ၁၉ရက်နေ့၌ ထိုကရင်နှင့် ရခိုင်တော်လှန်ရေးသမားများသည် အန္ဒိယနိုင်ငံမှ ထွက်ခွါခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နယ်သာလန်အစိုးရက လူသားချင်းစာနာသည့်အနေဖြင့် ယင်းတို့ကို လက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမှန်တကယ် ၎င်းတို့အဖွဲ့တွင် ၃၃ဦးရှိပြီး ကရင်အမျိုးသားဖြစ်သူ စောတိုးတိုးနှင့် ရခိုင်အမျိုးသားဖြစ်သူ ခိုင်စံသိန်းတို့ နှစ်ဦးမှာ အင်တာဗျူး မအောင်ဘဲ အပယ်ခံရသည့်အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဆက်လက် နေထိုင်နေရကြောင်း သိရသည်။
Posted by KCA.UK at 00:240comments
ဒီနေ့မနက် ၅ နာရီလောက်ကနေ စတင်ပြီးတော့ မိုင်းရှုးမြို့နယ် မိုင်းအောက်ကျေးရွာအုပ်စု ဟွမ်ဟွေ့လော့ ကျေးရွာအနီးရှိ SSA မြောက်ပိုင်းတပ်တွေရဲ့ ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိ တပ်စခန်းကို အစိုးရတပ်က လာရောက်ပြီးတော့ တိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းကို အဖွဲ့ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူးစိုင်းလက ခုလိုပြောပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 09:110comments
ကရင်တိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ ယူကေ မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့အိပ်ဖွင့်ပေးစာ
open letter to Aung San Suu Kyi-revise
Posted by KCA.UK at 13:080comments
Posted by KCA.UK at 09:220comments
Posted by KCA.UK at 00:150comments
Francis Wade isafreelance journalist based in northern Thailand. He has been covering Myanmar for more than two years and keepsafirm eye on the pendulum that is Southeast Asian politics and the people and the powers that keep that region lurching from side to side.
Last Modified: 11 Jun 2012 08:34
The Rohingya are the "epitome of stateless, and spend their lives in unofficial camps where conditions are notoriously poor... their disaffection has made them ripe for Islamic militant groups and human traffickers" [REUTERS]
By မသင်းသီရိ VOA
Posted by KCA.UK at 15:330comments
Posted by KCA.UK at 14:320comments
Aung San Suu Kyi visiting Mae La Camp - video from Karen Education Department
Posted by KCA.UK at 14:240comments
Posted by KCA.UK at 00:370comments
မိမိတို့တိုင်းပြည်သည် လူမျိုးပေါင်းစုံ ဘာသာပေါင်းစုံ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်ထောင် စုနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ် ၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ အေးအတူပူအမျှ ယှဉ်တွဲနေထိုင်လာကြသည်။
ရန်းဗြဲကျွှန်း မုဒိမ်းမှုသည်လည်းကောင်း တောင်ကုတ် လူသတ်ပွဲသည်လည်းကောင်း လူမဆန်သော ရာဇဝတ်မှုများဖြစ် သဖြင့် ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချသည်။
ထိုဖြစ်ရပ်များသည် ယနေ့ကဲ့သို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးနှင့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းပြီး မိမိတို့တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသော ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းသို့ ဦးတည်ချီတက်နေချိန်တွင် မလိုလားအပ်သော နိုင် ငံရေး လှည့် ကွက်များဖြစ်ပေါ်လျှက် နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နိုင်စရာ ဖြစ်ရပ်များအဖြစ် လွန်စွာစိုးရိမ် ပူပန်မိကြသည်။
ထိုဖြစ်ရပ်များသည် လူမျိုးရေး ဘာသာရေးနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ အလွန်လက်မခံနိုင်သော ရာဇဝတ်မှု များသာ ဖြစ်သည့် အလျှောက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ ထိရောက်မြန်ဆန်စွာ အရေးယူဖြေရှင်းပေး ပါရန် အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း အား လေး နက်စွာတိုက်တွန်းပါသည်။
လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ဆက်လက်မကြီးထွားလာစေရန် နိုင်ငံရေး လူမှုရေး ဘာသာရေး နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် နားလည်မှုများ ရရှိလာစေရန် အထူးကြီးကြပ်စီမံ၍ အရေးတယူဆောင်ရွက်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
1. International Burmese Monks Organization
2. NLD LA,UK
3. Women of Burma, UK
4. Arakan Community
5. Burma Democratic Concern
6. Chin Community, UK
7. Kachin Nation Organization
8. Karenni Community
9. Burmese Democratic Movement Association
10. Oversea Shan Association
11. Arakan Rohingya National Organization
12. Burmese Rohingya Organization, UK
13. Burmese MuslimAssociation
Posted by KCA.UK at 00:270comments
ဒီနေ့မနက် အမေ ရောက်လာမယ့် မဲဆောက်လေဆိပ် ရှိရာကို ကျနော် အစောဆုံး ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေယာဉ်ကွင်းထိပ်မှာ ပုလိပ်တွေက စပြီး စစ်ဆေးပါတယ်။ အမေ့ကို မတွေ့ရ၊ ဓါတ်ပုံတွေ မရိုက်ရရင် ခွင့်မပြုကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ သူတို့ကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက် ရောက်ရှိလာတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို သေသေချာချာ နေရာချထာရင်း ဓါတ်ပုံတွေ တဝကြီး ရိုက်ပါတော့တယ်။ အလုပ်သမားတွေကိုလဲ နေရာချထားလိုက်၊ ဓါတ်ပုံတွေလဲ ရိုက်လိုက်နဲ့ အမေလာမဲ့ခရီးကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ မဲဆောက်မြို့ရဲ့အသံလွှင့်ဌာနတခုဖြစ်တဲ့ မက် (စ်) ရေဒီယိုကနေ ကိုအရှည်ကြီး တိုက်ရိုက်အသံလွှင့် အစီအစဉ် လုပ်ပေးပါဆိုတော့ အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ ရင်ထဲကအသံတွေကို ညှစ်ထုတ်ရင်း ကိုယ်တိုင်လဲ ရင်ခုန်ခဲ့ရပါတယ်။ လေယာဉ်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ တောင့်တနေတဲ့ အမေ၊ ပြည်သူ့အမေ တကယ် ပါလာပြီဆိုတော့ ပျော်လိုက်တာ အရမ်းပဲ။ တဖက်ကလဲ အသံလွှင့်နေတော့ တွေ့တာတွေ တခုစီ ပြောပြရင်နဲ့ အမေ့ရဲ့ကား ဗြုန်းကနဲ ကျနော့် ရှေ့ကိုရောက်လာတယ်။ ကျနော် ရပ်နေတာက ရှေ့ဆုံးမှာ လေ။ ပျော်လိုက်တာ အရမ်းပဲ။ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ မေ့သွားတယ်။ အသံလွှင့်ရင်း သားတွေကို အားပေးတဲ့ နူးညံ့အိထွေးတဲ့ အမေ့ရဲ့လက်ကို ကိုင်ပြီး နှုတ်ဆက်ခွင့် ရလိုက်တာ မျက်ရည်တောင် ကျတယ် ဗျာ။ အမေ့ရဲ့လက်ကို ကိုင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ နုတ်ဆက်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမေ။ ဒီနောက်မှာ အမေ့ရဲ့ကားနောက်ကို ပြေးလိုက်ပြီး အသံလွှင့်ရတာလဲ မောရမှန်း မသိခဲ့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ပျော်ရွှင်လွန်းလို့ အင်တာနက်ဆိုင်ကို ပြေးပြီး ကိုမြင့်လှိုင်ဆီ ဓါတ်ပုံတွေ အလျှင်အမြန်ပဲ ပို့လိုက်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေတင်လို့ မပြီးသေးခင်မှာပဲ ဖုန်း ဝင်လာတယ်။ ကိုအရှည်ကြီးရေ၊ ကျောင်းသားဆေးခန်းရှေ့မှာ လူအင်အား တထောင်းကျော် ရေ တော်တော် ငတ်နေပြီ၊ အမြန် ကူညီပါဆိုတာနဲ့ ပြန် ပြေးရပါတယ်။ အမေ့ကို စိတ်အားထက်သန်စွာ စောင့်မျှော်နေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် သောက်ရေ စီစဉ်ရပါတယ်။ အကိုရေ၊ လုပ်ပါဦး၊ ပေးပါဦးနဲ့ စီစဉ်လိုက်တာ ရေ ပါကင် (၁၂) ဖာပဲ ရလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ လှမ်းမှာ ရတယ်။ အကို ကားကို အခုထုတ်ပြီး အနည်းဆုံး ရေ ပါကင် (၅၀) လာ ပို့ပေးပါ၊ နောက်မှ ပိုက်ဆံ ပြန် ရှာမယ် လို့ လှမ်းပြောပြီး စီစဉ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ချစ်တဲ့ အမေ့ကိုတွေ့ဖို့ မနက်ထဲကလာပြီးတော့ စောင့်နေရသူတွေကို သောက်ရေ ကမ်းရတဲ့ပီတိနဲ့အတူ ရင်ထဲမှာ ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာ ခံစားရပါတယ်။ အမေ့ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို သိနိုင်အောင် အဆက်အသွယ်လုပ်တော့ “အရှည်ကြီး ရေ၊ ဆေးခန်းကို မဝင်တော့ဘူး။ လေဆိပ်ကို တိုက်ရိုက် သွားရတော့မယ်“ ဆိုတာကို သိလိုက်တာနဲ့ အမေ့ကိုချစ်တဲ့ အမေ့ရဲ့ပြည်သူတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ လေဆိပ်မှာ သွား စောင့်လို့ရအောင်၊ မီးပွိုင့်မှာလဲ စောင့်နိုင်အောင် စီစဉ်ရတာ လက်မလည်တော့ပါဘူး။
Posted by KCA.UK at 23:370comments
Posted by KCA.UK at 23:180comments
By မအေးအေးမာ VOA
Posted by KCA.UK at 19:520comments
East Asia 2012 - Press Conference with Daw Aung San Suu Kyi
ဇွန်လ ၂ရက်၊ ၂၀၁၂။ မွန်းလွဲ ၁နာရီခွဲ (ကေအိုင်စီ)
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့လာရောက်ခဲ့သည့် မြန် မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဇွန်လ ၂ရက်နေ့ ထိုင်းစံတော်ချိန် မနက် ၉နာရီခွဲတွင် မဲဆောက်မြို့လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံသား အပါအ၀င် လူထုပရိဿတ် တစ်သောင်းဝန်းကျင် ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
၎င်းနောက် မနက် ၁၀နာရီကျော်အချိန်တွင် မဲဆောက်လေဆိပ်မှ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းသို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မနက် ၁၁နာရီဝန်းကျင်ခန့်တွင် မယ်လစခန်းအတွင်းရှိ MOI ရုံးခန်းတွင် စခန်းဆိုင်ရာ ထိုင်းအာဏာပိုင်များ၊ စခန်းကော်မတီဝင်အချို့နှင့် တစ်နာရီကျော်ကြာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဆွေးနွေးခန်းတွင် ပါဝင်သူ လူငယ်တစ်ဦးက “အဓိကပြောသွားတာကတော့ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ လက်ရှိ စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်မှုကို အရင်ကလို ဖူလုံမှုရှိအောင် သူ့အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်။ နောက်တခုက ဒုက္ခသည်တွေ မိမိနေရပ်ကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပြန် လည်နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်လည်း ကြိုးစားစီစဉ် လုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့တော့ ပြောဆိုဆွေးနွေးသွားပါတယ်”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြော သည်။
နေ့လည် ၁၂နာရီကျော်တွင် မယ်လစခန်း၊ ဇုံဘီရပ်ကွက်ရှိ ဘောလုံးကွင်း၌ “အမေစု အမေစု။ ဒေါ်စု ကျန်းမာပါစေ”ဟု ကြွေးကြော်ကာ ကြိုဆိုစောင့်စားနေကြသည့် ဒုက္ခသည်လူထု ၄၀၀၀နီးပါးကို နှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုခဲ့ပြီး အနီးရှိ AMI ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု ရင်း နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ခဲ့ကြောင်း ကိုယ်တိုင်သွားရောက် သတင်းယူနေသည့် ကေအိုင်စီသတင်းထောက်က ပြောဆိုသည်။
“ဒေါ်စုလာတာ လုံခြုံရေးကလည်း အထပ်ထပ်ပဲ။ အနားကပ်လို့လည်း မမရဘူး။ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူဖို့တောင် အတော်ခက်တယ်။ နိုင်ငံခြား သား သတင်းထောက်တွေလည်း မလွယ်ဘူး”ဟု ကြိုဆိုစောင့်စားသူ မယ်လဒုက္ခသည်တစ်ဦးက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ထိုင်း ဒု ၀န်ကြီးချုပ် ချလုံ ယူဘမ်ပရုန်းတို့ ယမန်နေ့က တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ - Bangkok Post)
ထိုင်းနိုင်ငံသားများနှင့် အတူ တရားဝင် လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာ နိုင်ငံသားများကို တနေ့လုပ်အားခ ဘတ်ငွေ ၃၀၀ (၁၀ ဒေါ်လာ) ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ထိုင်း ဒု ၀န်ကြီးချုပ် ချလုံ ယူဘမ်ပရုန်း က ပြောသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ယမန်နေ့က တွေ့ ဆုံခဲ့ပြီး ချလုံ ယူဘမ်ပရုန်းက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း bangkokbiznews အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ “တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ အနေနဲ့ ဘတ် ၃၀နဲ့ ဆေးကုသလို့ရတဲ့ အခွင့်အရေးတွေ၊ ပြီးတော့ တနေ့ လုပ်အားခကို ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေ ရတဲ့အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးမယ်”ဟု ချလုံ ယူဘမ်ပရုန်းက ပြောသည်။ လတ်တလော ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ၈ သိန်းခန့်ရှိပြီး မှတ်ပုံ မတင်ရသေးသူ ၁ ဒဿမ ၂ သန်းကိုလည်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။ မြန်မာအလုပ်သမားများကို၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသားများနှင့် အတူ တနေ့ လုပ်အားခ ဘတ်ငွေ ၃၀၀ ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု သိရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ထိုင်း အစိုးရအနေနှင့် မြန်မာအလုပ်သမားများနှင့် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များအား ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေမှုများကို ကျေးဇူတင်ကြောင်း bangkokbiznews သတင်း၌ ရေးသားသည်။ “ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ ငယ်ပေမယ့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံလို မချမ်းသာ ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒုက္ခသည်တွေကိုတော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကူညီခဲ့တယ်”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုသည်။ ဒု ၀န်ကြီးချုပ် ချလုံ ယူဘမ်ပရုန်းနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်
Posted by KCA.UK at 14:390comments
KCA Sheffield General Meeting and Election
Posted by KCA.UK at 13:560comments